Accueil > Gazetin'ny nosy > HVM: Fanovana mankany amin’ny fahafatesana
HVM: Fanovana mankany amin’ny fahafatesana
Mihazakaraka manova ny fitantanan-draharaha eto amin’ny firenena ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ary ny praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly amin’izao fotoana izao. Izany dia ny hiatrehana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2108.
Amin’izao fotoana izao dia haongana indray ny filohan’ny Antenimierampirenena Jean Max Rakotomamonjy sy ny birao tarihiny etsy Tsimbazaza. Nanomboka tamin’ny voalohan’ity herinandro ity no mikotrika izany ny depiote pomba ny fitondrana sy ny HVM. Omaly zoma faha 17 novambra 2017 maraina dia nifanazava tamin’ireo birao maharitra ireo ireto depiote ny depiote sasantsasany izay lohandohany amin’ity fanonganana ity. Tamin’izany no nahafantarana fa tsy manaiky ny hitondran’ireo birao maharitra ireo intsony ireto depiote ireto. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia milaza izy ireo fa efa mahatratra 100 ny sonia voaangona amin’izao fotoana izao.
Ity izany no fanonganana faharoa ny birao maharitra ny Antenimierampirenena tao anatin’ny mandà iray ny mpitantana ny andrim-panjakana ity. Ny iray voalohany dia ny fanonganana an-dRazanamahasoa Christine tamin’ny taona 2014 iny.
Amin’ny herinandro ambony iny izany no hahafantarana ny fivoaran’ity raharaha ity.
Toa ny nahazo an’ingahy Honoré Rakotomanana filohan’ny Antenimierandoholona ihany no fijery ny sarisary pôlitika amin’izao fanonganana an’i Jean Max Rakotomamonjy sy ny birao miaraka aminy izao.
Maro ny resaka mandeha amin’izao fanonganana ny birao mpitantana ity andrim-panjakana ity izao. Misy ny milaza fa resaka tsy fahaiza-mitantana hono, nefa raha izany marina nahoana no izao vao nanao izany satria iarahantsika mahita fa efa hatramin’ny niandohany no maro ny fanakianana misy ao amin’ity andrim-panjakana ity. Ingahy Rakotomanana Honoré ange ka tsy nisy zavatra nanakianana azy na kely aza saingy iny nesorin’ny HVM iny satria tiana hitondra ingahy Rivo Rakotovao. Izy no heverina fa hisolo an’ingahy Hery Rajaonarimampianina rehefa hilatsaka hofidiana indray ity filohampirenena ity amin’ny taona ho avy. Tsy misy hafa izany koa no tetika amin’izao fanovana ny birao maharitra ao amin’ny Antenimierampirenena izao. Raha ny resaka mandeha avy amin’ny mpikambana avy amin’ny vondrona HVM ao amin’ny depiote ao dia matetika izy ireo no milaza fa avelao mba ho an’ny hafa indray no mihinana alohan’ny taona 2018 izay hahalany ny fe-potoana maha-eo ireo depiote ireo. Ity resaka hoe “avelao mba ho an’ny hafa koa no hihinana” ity no nanaitra anay amin’izao raharaha izao. Midika zavatra be izany raha fakafakana fa indrindra antokon’ny fitondrana no milaza izany. Ny fihinanana izany no mibaiko ireto depiote ireto tamin’ny fomba fiasany ao Tsimbazaza ao ka tsy mahagaga raha alentika ny fahantrana toa izao ny firenena.
Noho ny fanonganana misesisesy ataon’ny mpitondra ankehitriny dia mandeha mankany amin’ny fahafatesan’ny fitondrana izany ny raharaha eto. Naongana ingahy Ravelonarivo Jean praiminisitra taloha fa mangelingelina, toa izany koa i Honoré Rakotomanana filohan’ny Antenimierandoholona fa tsy misy hanaovana ny teti-dratsy, amin’izao fotoana izao dia haongana koa ingahy Jean Max Rakomamonjy rehefa avy nanongana an-dRazanamahasoa Christine tao amin’ity Antenimierampirenena ity satria tsy misy ihinanana hono. Heno koa izao fa ho esorina tao amin’ny toerany ny filohan’ny fampanoavana amin’ny fitsarana eto Antananarivo ka hosoloina HVM koa hono satria tsy voabaiko. Ireo seho rehetra ireo dia miampy ny halatra sy ny kolikoly ary fanodinkodinanan volam-bahoaka ataon’ny mpitondra HVM sy ny mpomba azy ireo.
Izay fitondrana nanao ampihimamba ny fitondrana toa izao dia niongana teo amin’ny toerany avokoa. Ivereno kely ny tantara dia hanamarina ny voalazanay izany ianareo. Mba mahaiza maka lesona ihany tsy hanenina.